I-2F -Iphupha eliMbala-iKhitshi eneZixhobo eziNtsha - I-Airbnb
I-2F -Iphupha eliMbala-iKhitshi eneZixhobo eziNtsha
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSugar
-Indlu yethu ibekwe kufutshane nommandla wechibi (indawo yabakhenkethi, iteksi kunye nezithuthuthu zinokuza ngokuthe ngqo, akukho mfuneko yokunyuka intaba) kwaye kude nesiphithiphithi semivalo kunye neendlela.
-3-6 imizuzu ngokusekwe kwindlela okhawuleza ngayo uhamba ukuya ngasechibini. Zininzi iivenkile ezincinci ezithengisa imifuno ephilayo kunye nenyama emnyango. Kwivenkile enkulu yevenkile enkulu kwindawo esecaleni kwechibi idinga imizuzu emi-6-8.
1, Indawo elungileyo: Indlu ikwimizuzu eyi-3-5 kude nommandla wechibi. Iiteksi kunye nezithuthuthu zinokufikelelwa ngokuthe ngqo, kwaye akukho mfuneko yokunyuka intaba.
I-2, ukulala okuthuthuzelayo: Onke amashiti eebhedi asuka kwi-100% yomgangatho ophezulu wekotoni, ukuxinana okuphezulu kunye nokukhululeka. Oomatrasi bathambile kwaye benogwebu obutofotofo.
I-3, Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo: INepal lilizwe lezolimo elingaphuhliswanga elingasebenzisi i-pesticides kunye nezichumisi xa kulima imifuno. Ke ngoko, iivenkile ezincinci ezisemnyango zithengisa izithako ezisempilweni kwaye incasa imnandi ngakumbi. Ikhitshi ilungiselele i-seasonings esisiseko, irayisi, iimbotyi, kunye neoyile kajongilanga (zombini eziphilayo) kunye nezinye izinto zokupheka kwakho. Kodwa irayisi irhabaxa kancinane, kodwa le yi-organic.
I-4, Amanzi akhuselekileyo: Amanzi aseNepalese akanakutyiwa ngokuthe ngqo, sinika amanzi okusela kunye nezifudumezi zamanzi.
- 3 imizuzu ukuhamba ukuya kwindawo Lakeside (ukusuka alley yethu, eyona idumileyo Lakeside Lounge Fishtail Lounge kunye National Park - umoya omtsha, ihlathi, imihlaba eluhlaza kunye Fewa Lake). Kungenxa yoko le nto uninzi lweendawo ekuchithelwa kuzo iiholide kunye neespas zakhiwa kule ndawo endaweni yeehotele eziqhelekileyo.
-Zininzi iicafe ezintle kunye neendawo zokutyela kwindawo esecaleni kwechibi.
-Zininzi iivenkile ezincinci emnyango, ungathenga imifuno emitsha.
Umbuki zindwendwe ngu- Sugar
Ukuze uqinisekise ubumfihlo bakho, andiyi kubonakala endlwini, kodwa ukuba kukho naziphi na uncedo, unokuqhagamshelana nam naliphi na ixesha, ndingeza ngokukhawuleza.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pokhara